एभिन्युज टेलिभिजनभियतनाम भ्रमण सफल र सार्थक रह्यो : प्रम ओली (अन्तर्वार्ता) - एभिन्युज टेलिभिजन
भियतनाम भ्रमण सफल र सार्थक रह्यो : प्रम ओली (अन्तर्वार्ता)
30 Baishakh 2076 Monday 8:36 am प्रतिकृया दिनुहोस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ५ दिने भियतनाम भ्रमण सकी आज बिहान कम्बोडियाका लागि प्रस्थान गरेका छन् । गत बैसाख २६ गते साेतर्फ प्रस्थान गरेका उनले भियतनाममा रहँदा समकक्षी न्गुएन सुआन फुकसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। यसबीचमा महत्वपूर्ण सम्झाैतासमेत भएका थिए। प्रधानमन्त्री फुककाे निमन्त्रणामा भियतनाम आएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारत नेपाल व्यवसायी मञ्च, हो चि मिन्ह एकेडेमी अफ पोलिटिक्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बैसाख दिवसलाई सम्बोधन गरे। कम्बाेडिया प्रस्थान गर्नुअघि भियतनाम भ्रमणमा भएका उपलब्धीका सम्बन्धमा रासस प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।
यो भ्रमण अत्यन्तै सफल र फलदायी रह्यो। यसका दुई पाटा थिए- पहिलो सरकारको तर्फबाट र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध जयन्तीका अवसरमा १ सय १२ राष्ट्रका प्रतिनिधिबीच बुद्धको जन्मस्थलको प्रतिनिधिको हैसियतले बुद्धका विचार, आदर्श र आजको दिनमा त्यसको सान्दर्भिकताको बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी दिनु, यी दुबै सन्दर्भबाट यो भ्रमण सफल र सार्थक रह्यो।
यो भ्रमणले अब नेपाल र भियतनामबीच कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कत्तिको सफल र सहज रहला?
हो, नेपाल र भियतनाम लामो समयदेखिका मित्रहरू हुन्, जसको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको करिब ४ दशक भएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको स्तरमा यो मेरो भ्रमण पहिलो हो। यस सिलसिलामा विभिन्न पक्षसँग घनिभूत छलफल भएका छन्। अब हाम्रो कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ र सुमधुर हुन्छ। व्यापार विस्तार हुन्छ। नेपाली उत्पादनको निर्यात बढ्छ। करीब दश करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउनुपर्छ। यो भ्रमणबाट ती काम हुन्छन्।
यहाँले विश्व समुदायसँग आगामी वर्ष बैसाख दिवसको कार्यक्रम नेपालको लुम्बिनीमा गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसको तयारी के छ?
अवश्य पनि, हामी हाम्राजस्ता समानता भएका देशसँग सहकार्य र एकता अगाडि बढाउछौँ। हिजोका दिनमा हामीले असंलग्न आन्दोलनलाई निकै मजबुत बनाएका थियौँ, अब फेरि यस्ता सामयिक मुद्दा सशक्तरूपले अगाडि बढाउनुपर्नेछ
भ्रमणको सिलसिलामा केही दुई पक्षीय सम्झौता भएका छन्, अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहला?
यी सम्झौता छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँनेछन्। यसका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र बनेको छ। यसले आजबाटै काम सुरु गरेको छ।